Udliwanondlebe noCarlos Quintanilla-QGIS-Geofumadas
Ikhaya/Zobunjineli/Udliwanondlebe noCarlos Quintanilla-QGIS
Sithetha noCarlos Quintanilla, umongameli wangoku we Umbutho weQGIS, osinike ingxelo yakhe kukonyuka kwemfuno yemisebenzi enxulumene ne-geosciences, kunye noko kulindeleke kubo kwixesha elizayo. Ayisiyomfihlo into yokuba iinkokheli ezininzi zobuchwephesha kumacandelo amaninzi -ukwakha, ubunjineli, kunye nabanye-, “I-TIG zizixhobo ezinqamlezileyo ezisetyenziswa ngamacandelo amaninzi nangaphezulu azibona njengesixhobo esisebenzayo sokwenza izigqibo kwimiba echaphazela ummandla, Kwixesha elizayo, siza kubona iinkampani ezininzi ezisebenzisa i-TIG njengesixhobo somsebenzi, ngokuthe ngcembe iya kuba yinkqubo ye-automation yeofisi eya ixhaphaka kwiikhompyutha zomsebenzi ”.
Ukubandakanywa kwe-TIG kwiindawo ezahlukeneyo, kukho intetho yokudityaniswa kwamacandelo ukuze kufezekiswe ukudityaniswa kweprojekthi, ke uQuintanilla uthe kungoku nje kuya kufuneka ngokuthatha inxaxheba kweengcali kwiinkalo ezininzi ezisebenzisa i-TIG, i-architects, iinjineli , okusingqongileyo, oogqirha, abophuli-mthetho, iintatheli, njl.
Ukongeza koku kungasentla, i-GIS yasimahla kuye kwafuneka ilungelelanise ukuze iphendule kwiimfuno ezivelayo, kwaye ihambisane nenkqubela phambili kwezobuchwephesha, i-GIS yasimahla sisiqinisekiso sokusebenzisana phakathi kwezicelo kunye namathala eencwadi. KwiCRM, ukusebenzisa ilayibrari yobukrelekrele bokufakelwa sele kunokwenzeka, kwaye ngokuyinxenye siyabulela kwinto yokuba iinkqubo zesoftware yasimahla zidityanisiwe.
Siyazi ukuba iminyaka ye-4 yedijithali izisa nenjongo yokubumba izixeko ezinobuchule kungekudala. Kodwa, i-GIS iluvumela njani ulawulo olusebenzayo lwezixeko ezi-smart? Izixeko ze-Smart ziya kuba xa ukusebenzisana okuphezulu kufezekisiwe phakathi kwazo zonke izicelo, ukumiliselwa kwe-GIS yasimahla kuvumela izixeko ukuba zikrelekrele. Izixeko ezi-Smart ziya kuba xa idatha ikumgangatho kwaye izixhobo zilungelelaniswe neemfuno zabemi.
I-Quintanilla, ibonakalise ukuba ukudityaniswa kwe-BIM + GIS akulunganga, kodwa kunokuba kunjalo ukuba bekukho unxibelelwano phakathi kwamazwe omabini, kuyimfuneko ukufumana iqela lokuphucula itekhnoloji ye-BIM eyaziyo ukusebenza kwe-GIS ukuze ibenze bahlale kunye. Ukudityaniswa kwezicelo zombini kuya kuzisa izibonelelo kwimeko yokonga ngokwazisa ijiyometri kunye neempawu ezivela kwi-GIS kwaye zinokusetyenziswa kwi-BIM.
Kwangokunjalo, xa sibona umdla kwihlabathi liphela ekusekweni kwezixeko ezinobuchule, sabuza ukuba umbutho weQGIS uphuhlise nasiphi na isixhobo ukulungiselela le njongo. UQuintanilla ugxininise ukuba akasazi nasiphi na isixhobo esinokusetyenziselwa ukwenza izixeko ezinobuchule, kodwa i-QGIS kunye nezongezo zayo ezingaphezulu kwama-700 zisisixhobo esisebenzayo sokuba nezixeko ezihlakaniphile. Uncedo olukhulu lwe-QGIS ngaphezulu kwabakhuphisana nayo zizongezo ezingaphezulu kwama-700 ezinokufakwa, ngaphandle kwenani elikhulu lezixhobo esele ziqulathwe yi-QGIS njengomgangatho. Kulula kakhulu ukwenza iiplagi ezintsha ezisebenza kangcono ekusebenziseni amagcisa eQGIS kunye nabasebenzisi.
Malunga nokwamkelwa nokwamkelwa kweemveliso zoMbutho weQGIS, umongameli wakwenza kwacaca kuthi ukuba iQGIS isoftware yasimahla kwaye emva koluntu kukho iinkampani ezininzi, njengoko izixhobo ezitsha ezichaphazela undoqo weQGIS kugqitywe ngazo kwikomiti yezobugcisa. yeyiphi i-QGIS yaseSpain emele. Ngelixa kwiiplagi, abadali banenkululeko epheleleyo yokwenza nantoni na oyifunayo. Ukusuka kumbutho wethu nakubo bonke abanye sinenjongo yokusasaza inkqubo ye-QGIS kwiinkomfa, iintetho, kunye neeforamu apho abaqeqeshi becandelo le-GIS badibana khona Ukubonisa impumelelo ephumeleleyo yeyona ndlela yokufundisa abasebenzisi abatsha ukuba basebenzise i-QGIS .
Ngokuphathelele kwimigangatho yokusebenzisana, uQuintanilla wathi uninzi lwemigangatho luvela kwi-OGC (i-Open Geospatial Consortium), i-QGIS inegunya lokuziqhelanisa nemigangatho emiselweyo, ukuze kube lula ukuyilandela kunye nokuphucula ukusebenzisana. phakathi kwezicelo kunye neeseva. Ezinye iinkqubo zorhwebo ngokungagqibekanga zisebenzisa iifomathi zabucala kwaye emva koko zilungelelanise imigangatho, i-QGIS iyaziqhelanisa nemigangatho ukusuka kwingcambu, iza ngaphakathi. Mhlawumbi iinkonzo zemephu (WMS, WFS, WFS-T,) zezona zisetyenzisiweyo, kodwa zikhona nezinye ezibalulekileyo, imethadatha, iifomathi zedatha (gml, GPKG, njl.).
Ngokusetyenziswa kwezixhobo eziphathwayo ezibonelela ngolwazi oluthe ngqo kumsebenzisi, olunokwenzakalisa okanye luncede ummi kunye nokusingqongileyo, umongameli weQGIS Association uthi likrele elintlangothi-mbini xa idatha isetyenziswa ngobuqhetseba nangaphandle hlonipha iimfihlo zabantu. Nangona kunjalo, ziidatha ezinomdla kakhulu, kwaye zihlala zisisikhokelo somthetho, kufuneka zisetyenziselwe iinjongo zesayensi kunye neziluncedo kubemi. Idatha evulekileyo, i-OpenData, yidatha esivumela ukuba senze izifundo ezininzi ezinomdla kakhulu. I-OpenStreetMap iya kuba ngumzekelo olungileyo.
Ukongeza, sicela ukubonakala kwakho malunga nokubaluleka kwenkqubo yomhlalutyi we-GIS kweli xesha le-4 ledijithali. Kuxhomekeka kwinkcazo yomhlalutyi we-GIS, ukuba sichaza umhlalutyi we-GIS njengengcali ekufuneka inike iimpendulo kwiingxaki ze-GIS, ke u-Ewe uya kuba yimfuneko. Nangona kunjalo, ukuba umhlalutyi uzichaza njengengcali ezihlalutya iiprojekthi kwaye zenze izigqibo kunye neqela lomsebenzi, akukho mfuneko yokuba umhlalutyi ayazi indlela yokwenza inkqubo, kodwa umntu weqela uya kubaluleka.
Nangona ukuba ngumhlalutyi olungileyo, ngaphandle kokuba yingcali yenkqubo, kuya kuba kuhle ukwazi okunokwenzeka, umzamo obandakanyekayo kuvavanyo lomsebenzi ofunekayo ukulungiselela imisebenzi kwaye ke wenze izigqibo zokucwangcisela uphuhliso olufanelekileyo lweeprojekthi.
Akubalulekanga, kodwa kuyacetyiswa kakhulu, akuyomfuneko ukwenza inkqubo, zininzi izixhobo ezinokwenziwa ngaphandle kolwazi lwenkqubo, kodwa kwiiprojekthi ezinzima zihlala ziluncedo kakhulu ukwenza umsebenzi othile. Kodwa iya isiba yimfuneko kwaye inamandla ngakumbi ukuba neeteknoloji eziyaziyo inkqubo kunye nokudibanisa amaqela ahlukeneyo.
NgokukaQuintanilla, ukusetyenziswa kunye nokufundwa kwe-geotechnologies kube yinto entle kakhulu, uninzi lwezifundo ze-GIS ezikwi-Intanethi zifundisiwe, uninzi luthathe ithuba lokubhalisela iikhosi zisebenzisa ithuba lokuba bekukho ixesha elininzi elikhoyo. Ngokubhekisele kwimanyano, kulo nyaka akukho namnye ovela kwi-QGIS eSpain, bayaqhubeka nalawo afanayo nonyaka ophelileyo, nangona kunjalo i-QGIS yamanye amazwe iyaqhubeka nokuba yiprojekthi ye-OSGeo https://www.osgeo.org/projects/qgis/
Iiprojekthi ezintsha ezivela kumbutho ziya kuba kukumilisela iwebhusayithi entsha yoMbutho wabasebenzisi beQGIS Spain (www.igisi.es) zale mihla kwaye zisebenza ngokukuko, ukuze amalungu ayisebenzise ukufumanisa malunga nezinto esizenzayo kumbutho kunye nendawo yokuhlangana yamalungu kunye nabangengawo amalungu anovelwano ngeprojekthi yeQGIS.
Siyavuya kakhulu ukuba iiprojekthi ezizalwe eSpain kwaye zisebenzisana nombutho zithatha inxaxheba kwiminikelo eya kwi-QGIS yamazwe aphesheya, njenge-GISWater, isixhobo solawulo lobulumko lwezixhobo zamanzi, amanzi okusela, ucoceko kunye namanzi emvula.
IBhunga lesixeko saseBarcelona liza kuqhubeka nokuba lilungu lombutho, kukuphela kolawulo lukarhulumente oluthathe eli nyathelo. Ndingathanda ukukhankanya igalelo elenziwe nguVíctor Olaya, umphuhlisi weQGIS, kunye nombhali we Incwadi ye-GIS, UVíctor unikezela ngomda woqoqosho lweencwadi eziprintiweyo ezithengiswe kuMbutho wabasebenzisi beQGIS eSpain
Ithemba lekamva le-TIG yasimahla liyanda kwaye kuya kusiba nzima ukuthethelela ukusetyenziswa kwezixhobo zorhwebo, oku kuyakwenza ukuba icandelo le-TIG yasimahla likhule, kufuneka silungiselele kwaye sisebenze ngokubambisana ukuze singaphindi iinzame, kunjalo Ngesi sizathu, imibutho efana neyethu ibalulekile kuhlumo olucwangcisiweyo nolulungileyo lwecandelo.
Kuthathwe kuwo Imagazini yeTwingeo uHlelo lwesihlanu.
I-Autodesk Yazisa "Igumbi elikhulu" kwiiNgcali zoKwakha